Facebook သုံးစှဲသူတှကွေားမှာ နာ မညျကွီးနတေဲ့ Lisaရဲ့ အကနဲ့ ထပျတူ ကအြောငျ ကပွလိုကျတဲ့ အုပျစိုးခနျ့ရဲ့ Tiktok ဗီဒီယို – XB Media Myanmar
ခဈြပရိသတျကွီးရေ.. နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးကြျော အဆိုတျောလေးတဈယောကျ ဖွဈ တဲ့ အုပျစိုးခနျ့ကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အောငျမွငျအကြျောကွားဆုံး အနုပညာရှငျတှထေဲမှာ တဈ ယောကျအပါအဝငျပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆယျကြျောသကျအရှယျသာ ရှိသေးပမေယျ့ မိဘရဲ့ အား ကိုး အားထားပွုရာ သားကောငျးတဈ ယောကျဖွဈပွီး မကွာသေးမီအခြိနျကမှ သူရဲ့ အနုပ ညာ ငှေ ကွေး လေးနဲ့ သိနျးရာကြျောတနျ ကားလညျး ဝယျစီးနိုငျကွောငျး လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာ ထကျ မှာ မြှဝလောတာကိုလညျး တှရေ့ ပါတယျ။
အနုပညာအလုပျတှကေို ကွိုးစားလုပျကိုငျနပွေီး အသဈအသဈသော တေးဂီတတှကေို ဖနျ တီး နသေူဖွဈလို့ ပရိသတျတှအေကွိုကျနဲ့ ထပျတူကတြာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ယနမှေ့ာလညျး အုပျစိုးခနျ့က ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြမတ်ေတာကို အပွညျ့အဝရရှိစနေိုငျမယျ့ အရာလေးကို ပွုလုပျ လိုကျပွနျပါပွီနျော။ ဒါကတော့ Facebook သုံးစှဲသူ ပရိသတျတှကွေား ရပေနျးစားလူကွိုကျမြား နတေဲ့ BlackPink အဖှဲထဲက Main dancerတဈယောကျဖွဈတဲ့ Lisaရဲ့ ကကှကျကို ထပျတူ ကြ အောငျ ကပွလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရကျအနညျးငယျအတှငျး ပရိသတျတှရေဲ့ ပါးစပျဖြား ရပေနျးစားနတေဲ့ ကကှကျလေးတှကေို ကွညျ့ မိသူတိုငျး အခဈြပိုစလေောကျအောငျ အသညျးတယားယားနဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ Tiktok လေးကို ခဈြပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ကဲ… အဆိုတျော အုပျစိုးခနျ့က ကကှကျလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး အသညျးလေးတှပေေးခဲ့ဖို့ မမေ့ လိုကျပါနဲ့နျော …. ။
I m done with myself 🤣
♬ Song by_ Pon jantapaon – 달쑤
Source & Photo credit – Oak Soe Khant’s FB account
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ.. နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် အဆိုတော်ေ လးတစ်ယောက် ဖြစ် တဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်အကျော်ြ ကား ဆုံး အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ် ယောက်အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာ ရှိသေးပေမယ့် မိဘရဲ့ အား ကိုး အားထားပြုရာ သားကော င်းတစ် ယောက်ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီအချိန်ကမှ သူရဲ့ အနုပ ညာ ငွေြေ ကး လေးနဲ့ သိန်းရာကျော်တန် ကားလည်း ဝယ်စီးနိုင်ကြောင်း လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက် မှာ မျှဝေလာတာကိုလည်း တွေ့ရ ပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေပြီး အသစ်အသစ်သော တေးဂီတေ တွ ကို ဖန် တီး နေသူဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျတာကိုလည်း တွေ့ရ ပါ တယ်။ ယနေ့မှာလည်း အုပ်စိုးခန့်က ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်မေတ္တာကို အပြည့်အ ဝရ ရှိစေနိုင်မယ့် အရာလေးကို ပြုလုပ် လိုက်ပြန်ပါပြီနော်။ ဒါကတော့ Facebookသုံးစွဲသူပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားလူကြိုက်များနေတဲ့BlackPink အဖွဲထဲက Main dancerတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lisaရဲ့ ကကွက်ကို ထပ်တူ ကျ အောင် ကပြ လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျား ရေပန်းစားနေတဲ့ ကကွက်ေ လးေ တွကို ကြည့် မိသူတိုင်း အချစ်ပိုစေလောက်အောင် အသည်းတယားယား နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Tiktok လေးကို ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လ ည်ေ ဖ်ာပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ကဲ… အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့်က ကကွက်ေ လးေ တွကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့ လိုက်ပါနဲ့နော် …. ။